အတိတ်ဆီမှ လိင်သီးသန့်မခွဲခြားပဲ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ အံ့သြစရာအသုံးအဆောင် ၁၀ မျိုး - ONE DAILY MEDIA
အတိတ်ဆီမှ လိင်သီးသန့်မခွဲခြားပဲ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ အံ့သြစရာအသုံးအဆောင် ၁၀ မျိုး
Vogue မဂ္ဂဇင်းအတွက် ဓာတ်ပုံများမှ၀တ်စုံများဟာ Harry Styles အဖြစ် စံနှုန်းများပေးခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် လက်တွေ့တွင် ၀တ်စုံများနှင့် စကတ်များသည် ယခင်က အမျိုးသားများ ဝတ်ဆင်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဘောင်းဘီတိုနှင့် ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်များကဲ့သို့ အခြားပစ္စည်းများသည်လည်း ထင်ထားသည်ထက် ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော ရာဇဝင်များရှိကာ တစ်ချိန်က ယောက်ျားပီသသည်ဟု အမျိုးသမီးများက သတ်မှတ်ခံထားရသည့် အရာများစွာဖြစ်ခဲ့ပြီး အခြားအမြင်များစွာဖြင့်လက်သင့်ခံခဲ့ကြပါတယ်။
ယခင်က လိင်တစ်မျိုးတည်းသာ ဝတ်ဆင်ခြင်းမဟုတ်ခဲ့သည့် ပစ္စည်း ၁၀ ခုကို စုဆောင်းထားပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များကို သင့်အားမျှဝေပေးလိုပါတယ်။
1. 19 ရာစုအထိ အမျိုးသားများသည်လည်း စကတ်နှင့် ၀တ်စုံများကို ပုံမှန်ဝတ်ဆင်ကြပါတယ်
ဆန်းသစ်တဲ့ခေတ်မတိုင်ခင်အထိ အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးရော ရှည်လျားပြီး ချောင်ပွတဲ့အဝတ်အစားတွေ ၀တ်ကြပါတယ်။ ဝတ်စုံသည် ထိုခေတ်က အမျိုးသားများ၏ ဖက်ရှင်တွင် အဓိကကျပါတယ်။ 14 နှင့် 15 ရာစုများတွင် အမျိုးသားများ၏ စကတ်များသည် ပိုတိုပြီး လက်တွေ့ကျလာကာ ခြေအိတ်များ သို့မဟုတ် တင်းကြပ်သောဘောင်းဘီများနှင့် မကြာခဏတွဲထားခဲ့ပါတယ် အနောက်ဥရောပတွင်၊ အထူးသဖြင့် ဘုရင်များနှင့် မင်းမျိုးမင်းနွယ်များကဲ့သို့သော ချမ်းသာပြီး တန်ခိုးကြီးသော အမျိုးသားများက ပိုတိုသော စကတ်တိုများကို နှစ်သက်ကြပါတယ်။
2. ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်များကို နှစ်သက်ခဲ့သော ပြင်သစ်မှ Louis XIV
သူတို့ဟာ ဒီလိုဝတ်တဲ့ တစ်ဦးတည်းသောလူမျိုးများ မဟုတ်တာ သေချာတယ်။ တကယ်တော့ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်တွေက ကြီးစိုးမှုနဲ့ ပါဝါကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ ‘ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်ဘုရင်’ ၏ တရားရုံးတွင် မှူးမတ်တစ်ဦး ဝတ်ဆင်ထားသည့် ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်များ၏ အမြင့်သည် သူကိုင်ဆောင်ထားသည့် အာဏာပမာဏနှင့် ဆက်စပ်နေပါတယ်။
ယင်းမတိုင်မီက ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်များကို ခြေထောက်ဗလာဖြင့် လျှောက်သွားသော အခြေခံလူတန်းစားများနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော မြင့်မြတ်သည့် အီဂျစ်လူမျိုးများလည်းဝတ်ဆင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ၎င်းတို့ကို အီဂျစ်သားသတ်သမားများလည်း ဝတ်ဆင်ခဲ့ကြပြီး ထိုသူတို့အတွက် မြင့်မားသောဖိနပ်များက ပိုမိုလက်တွေ့ကျသော လုပ်ငန်း ရည်ရွယ်ချက်ကို လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။
3. Fedoras ကို အမျိုးသမီးများ ပထမဆုံးဝတ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်
Fedora သည် အမျိုးသမီးဦးထုပ်ဖြစ်ပြီး Fedora ပြဇာတ်ရုံမှ နာမည်ကျော် မင်းသမီး Sarah Bernhardt က ၎င်းကို ဆောင်းထားသည့်ပထမဆုံးသူအဖြစ် ပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဦးထုပ်နာမည်ရလာပုံလည်း ဒီလိုပါပဲ။ 20 ရာစု၏အစောပိုင်းနှစ်များဖြစ်‌ သော 1920 ခုနှစ်များတွင် Prince Edward ကိုမွေးစားသည့်အချိန်အထိ အမျိုးသမီးများကြားတွင် fedora က ရေပန်းစားခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် ဦးထုပ်၏ပုံစံသည် ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်ဟောင်းများစွာတွင် ပေါ်လာပြီး ယောက်ျားပီသမှုနှင့် ဆက်စပ်လာပါတယ်။
4. သမိုင်းတစ်လျှောက်တွင် အမျိုးသားများသည် လည်း မိတ်ကပ်လိမ်းလေ့ရှိပါတယ်\_
ဖာရောဘုရင်များသည် အနက်ရောင်ခြယ်ဆေးဖြင့် ဆွဲထားသော eyeliner စတိုင်များဖြင့် ၎င်းတို့၏မျက်လုံးများကို ပေါ်လွင်စေပါတယ်။အများအားဖြင့် မျက်လုံးကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အရှေ့အလယ်ပိုင်းရှိ ကျား/မ များက Kohl ကို အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ အီဂျစ်အမျိုးသားများ လိမ်းခြယ်သော ရှုပ်ထွေးသည့်မျက်လုံးမိတ်ကပ်သည် ၎င်းတို့၏ အဆင့်အတန်းနှင့် ရပ်တည်မှုအတွက်ရည်ရွယ်ချက် ကွဲပြားပါတယ်။ သမိုင်းတစ်လျှောက် ချမ်းသာသော အမျိုးသားများမှစပြီး ဆင်းရဲနိမ့်ကျသည်ဟု သတ်မှတ်ခံရသည့် ဗစ်တိုးရီးယားခေတ်အထိ မိတ်ကပ်ပုံစံအချို့ကို လိမ်းခြယ်ကြပါတယ်။
5. 18 နှင့် 19 ရာစုများတွင် corset များကို ၀တ်ဆင်ကြသည့်အမျိုးသားများ
corsets များကို အမျိုးသမီးအများစု တောင်အသုံးမပြုတော့သည့် အလွန်အမျိုးသမီးဆန်သောပစ္စည်းအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့ထင်မြင်နေသော်လည်း ၎င်းတို့ကို အမျိုးသားများဝတ်ဆင်ခဲ့သည့် သာဓကအနည်းငယ်ရှိခဲ့ပါတယ်။
18 နှင့် 19 ရာစုများတွင် အမျိုးသားများသည် သွယ်လျသောအသွင်အပြင်ကိုရရှိစေရန်အတွက် corsets များကို ၎င်းတို့၏ဝတ်စုံများတွင် ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းကာ လိုက်ဖက်သောအကျီများနှင့် တွဲဝတ်ပါတယ်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လည်း corset များကို မကြာခဏ ၀တ်ဆင်ကြပါတယ်။
6. အလယ်ခေတ်မတိုင်မီတွင် အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးပါ ဘောင်းဘီဝတ်လေ့ရှိပါတယ်
ရှေးခေတ်ယဉ်ကျေးမှုအမျိုးမျိုးမှ အမျိုးသမီးအများအပြားသည် လက်တွေ့ကျသောအကြောင်းပြချက်များဖြင့် ဘောင်းဘီကို ၀တ်ဆင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အနောက်ဥရောပမှ အမျိုးသမီးများသည်လည်း အမျိုးသားများနှင့်အတူ ဘောင်းဘီရှည်ကို ၀တ်ဆင်ကြပါတယ်။ လူလတ်ပိုင်းများတွင်‌ တော့ ဘောင်းဘီဟာ အမျိုးသမီးများအတွက် တားမြစ်ချက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ 19 ရာစုမှစတင်၍ ဘောင်းဘီရှည်များသည် အမျိုးသမီးများ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာပြန်ပါတယ် ။
7. ဘောင်းဘီတိုနှင့် ခြေအိတ်များကို ယောက်ျားဆန်သည့်ပစ္စည်းအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်း
လူလတ်ပိုင်းအရွယ်အမျိုးသားများက ပထမဆုံးဘောင်းဘီတိုဝတ်သူများဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းတို့ကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနှင့် စစ်ရေးအရ အသုံးပြုရန် သင့်လျော်သည်ဟု ယူဆပါတယ်။ နောက်ပိုင်းတွင် အမျိုးသားများသည် စကတ်တိုကဲ့သို့သော ၀တ်စုံများနှင့် ဘောင်းဘီတိုများကို တွဲဝတ်လာကြပြီး ဘောင်းဘီတို သို့မဟုတ် ခြေအိတ်များသာ ဝတ်ဆင်ခြင်းသည် လိင်နှစ်မျိုးလုံးအတွက် မသင့်လျော်တော့ဟု ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။အမျိုးသမီးများသည် ၁၉ ရာစုအထိ leggings နှင့် ဆင်တူသည့် ပစ္စည်းများ မ၀တ်ဆင်ကြပါဘူး။
8. ပန်းရောင်ကို ယောကျာ်းဆန်သည့်အရောင်အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း
အနီရောင်သည် ခွန်အားနှင့် စိတ်အားထက်သန်မှုတို့နှင့် ဆက်စပ်နေပြီး ပန်းရောင်ကို အနည်းငယ်ပျော့သော အနီရောင်ဟု ယူဆသောကြောင့် ၎င်းအား သန်မာပြီး ယောက်ျားဆန်သည့်အရောင်ဟုလည်း သတ်မှတ်ခံရပါတယ်။ အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးပါ ပန်းရောင်ဝတ်နိုင်သော်လည်း ယောက်ျားလေးများနှင့် လူငယ်များအတွက် ပိုမိုသင့်လျော်သည်ဟု ယူဆခဲ့ပါတယ်။ 19 ရာစုအတွင်း အမျိုးသားများသည် ပိုမို‌ တောက်ပသော အရောင်ကို ဝတ်ဆင်လာပြီး ပန်းရောင်သည် အမျိုးသမီးအရောင်ဖြစ်လာပါတယ်။
9. လက်ကိုင်အိတ်များကို မူလက အမျိုးသားများ သုံးခဲ့ပါတယ်
အလယ်ခေတ်နှင့် လက်ရာမြောက်သည့်ခေတ်တွင် အမျိုးသားများသည် အကြွေစေ့များ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ အစားအစာနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းများကို သိမ်းဆည်းရန်အတွက် လက်ကိုင်အိတ်များကို အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။
အဝတ်အစားများတွင် အိတ်ကပ်များကို မိတ်ဆက်လာခဲ့ပြီးနောက် လက်ကိုင်အိတ်များ လိုအပ်သည်ထက် နည်းလာသော်လည်း ချမ်းသာသော အမျိုးသားများသည် ၎င်းတို့၏ အဆင့်အတန်းကို ပြသရန်အတွက် ၎င်းတို့ကို အသုံးပြုဆဲဖြစ်ပါတယ်။
10. လက်ပတ်နာရီများဟာ အမျိုးသမီးအသုံးအဆောင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်
၁၈၀၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင် Naples ဘုရင်မကြီးအတွက် ပထမဆုံးလက်ပတ်နာရီကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု သမိုင်းပညာရှင်အချို့က ထင်မြင်ယူဆကြပါတယ်။ နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ အတွင်း အမျိုးကောင်းသမီး အများအပြားက လက်ပတ်နာရီများကို အမျိုးသမီးသုံးပစ္စည်းအဖြစ် ထင်မြင်ကြပြီး အမျိုးသားများက အိတ်ဆောင်နာရီများကို နှစ်သက်ကြတာ‌ ကြောင့် မြင့်မြတ်သောအမျိုးသမီး အများအပြားက လက်ပတ်နာရီများကို အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။
လက်ပတ်နာရီများကို 20 ရာစုတွင် အမျိုးသားများ စတင်ဝတ်ဆင်လာပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ယောက်ျားပီသမှုနှင့် လျင်မြန်စွာ ဆက်စပ်လာခဲ့ပါတယ် ။ ၎င်းတို့ကို ‘လက်ပတ်နာရီ’ ဟု အချိန်အတန်ကြာ ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများဟာ အမျိုးသမီးများအသုံးနည်းသွားကြပါတယ်။
ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်နှင့် ဆက်စပ်နေသည့် မည်သည့်အရာကို သင်အသုံးပြုလိုသနည်း? အောက်ပါမှတ်ချက်ကဏ္ဍတွင် ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောပြခဲ့ပါ
အမိုက်စား ဓာတ်ပုံများ သို့မဟုတ် ဇာတ်လမ်းအချို့ကို ဖော်ပြလိုပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့ထံပေးပို့လာသည်များကို စောင့်မျှော်ကြိုဆိုနေပါမယ်။
#onedaily #onedailynews #onedailymedia
သရဲအခြောက်ဆုံးနေရာဟု လူပြောများသော ထိပ်တန်း နေရာ(၁၀)ခု